Microstation-Bentley - Bogga 15 - Geofumadas
Bentley Engineering iyo GIS Tools
Hagaajinta image of GoogleEarth
Wuxuu horey uga hadlay inuu ku soo raro orthophoto Google Earth haddii aan ogaanay jaangooyooyinkeeda. Hadda aan isku dayno dhanka kale, haddii aan aragti ku leenahay GoogleEarth, sida loo soo dejiyo oo loo jaangooyo. Waxa ugu horeeya ayaa ah, inaan ognahay waxa ay u fiican tahay iyo maxaa diidaya Google Earth, hore ayaan uga hadalnay arintaas. Hagaag, waxa ugu horeeya waa in ...
Google Earth GIS kala cayncayn ah
Kartiyeyaashu ma laha hal-abuurnimo?
Waxay u muuqataa in sawir qaadayaashu aysan ahayn oo kaliya naqshadeeyayaasha sawir xun laakiin sidoo kale ay yihiin khayaalilayaal xun. Labada tusaale, kiiska Manifold ee ku jira nooca 7 wuxuu umuuqdaa inuu isticmaalay daaqadaha qaar clipart oo kaliya wuu badalay midabada. Waxyaabaha xun ayaa ah in Titanssee Titans ay sidoo kale sameysay Kiiska ...
Bentley Systems GIS kala cayncayn ah
GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
orthophotos Sida georeferenced ee Google Earth
Markii hore waxaan ka hadlay sida loo muujiyo khariidadaha Google Earth, hadda waxaan arki doonaa sida aan isla sidaas ugu qabanno sawir-qaadaha. Waxaa lagu fahamsan yahay sawir-qaade, sawir la saxay, oo aan ognahay sida ay u egtahay. Google Earth waxay codsaneysaa afar xog, oo u dhigma xarumaha dhinac kasta oo ka mid ah sawirka (fiiri sawirka hoose), dad badan ayaa aaminsan ...
Boggii hore Page 1 ... Page 13 Page 14 Page 15